सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् कति छ आजको भाउ ?
चैत ६, २०७६, बिहिबार
काठमाडौं । विहिबार सुनको मुल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा रु १ हजार ५०० ले घटेर प्रतितोला रु ७५ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि बुधबार सुन प्रतितोला रु ७...
कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी चिन्तामणि शिवाकोटीलाई
काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई दिइएको छ। सरकारले तत्काल केही समयकाे लागि शिवाकोटीलाइ कार्यबाहक गर्भनरको जिम्मेवारी दिइएको हो। मन्त्री...
काठमाडौँ । आज (बिहीबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ११९ पै...
रोकिएन नेप्सको ओरालो यात्रा
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्ने क्रम आज पनि रोकिएन। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्सेमा १६.२६ अङ्कले गिरावट आएको छ। मङ्गलबार नेप्से ४४.३३ अङ्कले घटेको थियो। य...
फेरि बढ्याे सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति छ आजको भाउ ?
काठमाडौं । आज सुन तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढेकाे छ । हिजो तोलाको ७५ हजार ५ सय रुपैयाँमा काराेबार भइरहेको छापावाल सुन आज ७६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी म...
अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा अन्य देशको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । आज (बुधबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ९ पैसा तोकेको...
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीबीच सम्झौता
चैत ४, २०७६, मंगलबार
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीबीच सम्झौता भएको छ । बैंकले आफ्ना क्रेडिट र डेबिट कार्ड ग्राहक, कार्यसमिति सदस्य, बैंकका कर्मचारी तथा उनका परिवारहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने...
तोलामा दुई हजारले घट्यो सुन, हेर्नुहोस् कति छ आजको भाउ ?
काठमाडौं । आज सुनको भाउ तोलामा दुई हजार रुपैयाँ घटेको छ। हिजो तोलाको ७७ हजार ५ सय रुपैयाँमा काराेबार भइरहेको छापावाल सुन आज ७५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासं...
काठमाडौँ । आज (मंगलबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १४ पैसा तोकेक...
काठमाडौं । आज सुनको भाउ बढेको छ । सुनको भाउ आज तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ७७ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार सुन प्रति तोलमा १५ सय रुपैयँले घ...